မင်းခွေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Golden Dox ခွေးကိုတွေ့ဖူးလား။ - Breeds
မင်းခွေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Golden Dox ခွေးကိုတွေ့ဖူးလား။
ထို့အပြင် Golden Weiner Dog၊ Golden Weenie Dog၊ Golden Dachshund နှင့် Golden Retriever Dachshund Mix ဟုလည်းလူသိများသော Golden Dox သည် cross poed ယင်းကိုဝိုင်းချုပ်ထားသောရွှေ Retriever ကိုဝက်အူချောင်းပုံသဏ္Dာန် Dachshund ဖြင့်မွေးထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးသည်။
Dachshund နှင့် Golden Retriever ရောနှောပါ
ဒါ ပျော့ပျောင်းသောမိသားစုခွေး ကိုက်ညီဖို့ပျော်စရာ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူလုံးဝကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောကလေးများနှင့်အတူကြီးမြတ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ Golden Dox အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုလေ့လာသည်။
Golden Weiner ၏မူလအစ / သမိုင်း
Golden Retriever Dachshund ရောနှောခြင်းသည်အဘယ်အရာနှင့်တူသနည်း
temperament: Golden Weenie ဆိုတာဘာလဲ။
Golden Dox အတွက်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲ
Golden Retriever Dachshund သည်ကျန်းမာသောမျိုးစိတ်တစ်ခုလော။
Dachshund Golden Retriever ရောနှောခြင်းကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
Golden Retriever Dachshund ရောနှောသောအလားတူမျိုးစိတ်များ
အဘယ်ကြောင့်ရွှေ dox ရ?
ဖြစ်စဉ်းစား ဒီဇိုင်နာခွေး Golden Dox သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌တစ်ခြားဟိုက်ဘရစ်ခွေးများမွေးမြူရေးတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ကြောင့် အမဲလိုက်နှင့်ခြေရာခံစွမ်းရည် မိဘမျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးတွင် Golden Retriever Dachshund ရောနှောခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံရာများတွင်အသုံးပြုရန်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Golden Retriever နဲ့တွေ့ဆုံပါ
The ရွှေ retriever breed 19 ရာစုအလယ်ပိုင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာစကော့တလန်အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤခွေးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရေငှက်များကိုရှာဖွေရာတွင်အသုံးပြုပြီးသူတို့၏ခြေရာခံနိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းရည်သည်မြေပေါ်တွင်ရှိသကဲ့သို့ရေတွင်ရှိသကဲ့သို့
ဒါ မြင့်မားသောအသိဉာဏ်ဖောက် ပထမ ဦး ဆုံး 1925 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ခွေးဂေဟာကလပ် (AKC) အားကစားအုပ်စုတွင်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
ဤခွေးကြီးများသည်သူတို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်အင်္ကျီများနှင့်အကောင်းဆုံးအချိုးအစားများကြောင့်လူသိများကြသည်။ အပြည့်အဝအရွယ်ရောက်ပြီးသောရွှေပြန်လည်ထုတ်ယူသူများသည် ၂၂ မှ ၂၄ လက်မ (၅၅ မှ ၆၁ စင်တီမီတာ) အကြားရှိပြီး ၅၅ မှ ၇၅ ပေါင် (၂၅ မှ ၃၄ ကီလိုဂရမ်) အကြားရှိသည်။
သူတို့၏လှပသောကုတ်အင်္ကျီသည်ရွှေရောင်အရိပ်အားလုံးတွင်မှောင်မိုက်နေသောကရမေလမှအဖြူရောင်အလင်းရောင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးရေတွန်းလှန်နိုင်သောအပေါ်ယံအလွှာနှင့်ထူထပ်သော undercoat ပါရှိသည်။
The Dachshund ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီတို့၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အနှစ် ၆၀၀ ခန့်ဤခွေးငယ်လေးများသည်စိတ်အားထက်သန်စွာမွေးဖွားလာခဲ့သည့်သမိုင်းတစ်လျှောက်ရှိခဲ့သည် ခွေးမုန့်အမဲလိုက်ခွေး ။
ပြင်သစ် Basset Hounds နှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသော Dachshunds ကိုပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည် AKC ရဲ့ hound အုပ်စုတစ်စု 1885 ခုနှစ်။
ဒီဖောက်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် လူကြိုက်အများဆုံးဝတ်ရည် 1950 ခုနှစ်တွင်န်းကျင် ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယားအပါအ ၀ င်တော်ဝင်မင်းသမီးများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့သည်။
နာမည်များအရ Dachshund ၏ကုတ်အင်္ကျီသည်မည်သည့်မျိုးစိတ်တွင်ခွေးထဲသို့ကျသည်ကိုမူတည်သည်။
ရှည်သောဆံပင်များမှရှည်လျားသောအမည်းရောင်ရှည်သောရှည်လျားသောဆံပင်များရှိပြီးဝါယာကြိုးဆံပင်ပါးသည့် Dachshund ၏အင်္ကျီသည်တို။ ထူ။ တောက်ပ။ မျက်ခုံးမွှေးကြိုင်လိမ့်မည်။
Dachshund အမျိုးအစားသုံးမျိုးစလုံးသည်အနီရောင်၊ ခရင်မ်၊ အနက်ရောင်၊ ချောကလက်၊ tan နှင့်အပြာတို့အပါအ ၀ င်အရောင်များစွာကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ခွေးတစ်ကောင်တွင်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုရောနှောလေ့ရှိသည်။
Dachshund အမျိုးအစားသုံးမျိုးအပြင်ဤခွေးများလည်းရှိသည် ဖြစ်စေစံသို့မဟုတ်သေးသေးလေးအဖြစ်ရပ်ကြီး ။
Standard Dachshunds သည် ၁၆ မှ ၃၂ ပေါင် (၇ မှ ၁၄ ကီလိုဂရမ်) အလေးချိန်ရှိပြီးဤခွေးသေးသေးလေးမှာ ၁၁ ပေါင် (၅ ကီလိုဂရမ်) အောက်တွင်ရှိပြီး၊ မြဝတီ ။
နေပါစေသူတို့ရဲ့အင်္ကျီ, အရောင်သို့မဟုတ်အရွယ်အစား, အားလုံး Dachshund ရဲ့သူတို့ရဲ့အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည် ကြွက်သား, ဝက်အူချောင်း -shaped ခန္ဓာကိုယ်ရှည် အဲဒီမှာစည်ရင်ဘတ်၊ ခြေထောက်တိုတိုနဲ့နားရွက်တစ်ချောင်းကိုတွဲဆွဲထားတဲ့ရှည်လျားတဲ့ခေါင်းရှိပါတယ်။
Golden Dox ၏အရွယ်အစားနှင့်တည်ဆောက်ပုံသည်မိဘများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအလွှမ်းမိုးဆုံးဖြစ်ကြောင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Golden Weenie သည် Golden Retriever မိဘ၏မျက်နှာပုံသဏ္headာန်ကိုကျယ်ပြန့်သောခေါင်းနှင့်အမွေခံလိမ့်မည်။ ဗာဒံစေ့မျက်စိနှင့်အနက်ရောင်နှာခေါင်း ။
Dachshund မိဘက Golden Dox ကို၎င်း၏ရှည်လျားသောနှောင်ကြိုးကိုပေးလိမ့်မည် အနိမ့်ပါးစပ်၊ ။
ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ာန်ကြောင့်ရွှေ Retriever Dachshund ရောစပ်ထားတဲ့ခွေးကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့နောက်ကျောကိုထိခိုက်နိုင်မှုမရှိအောင်သေချာစွာကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။
နှစ် ဦး စလုံးဝတ်ရည်သူတို့ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်အဖြစ် floppy တစ်စက်နားရွက် , ရွှေ Retriever နှင့် Dachshund ရောနှောခြင်း၏ခွေးပေါက်စဒီစရိုက်ကိုအမွေခံရကြလိမ့်မည်
Sandy လို့ခေါ်တဲ့ Golden Dox ရဲ့စွန့်စားခန်းဗွီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ သူမသည်အထွက်မသာပေမယ့်သူမလည်းကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောပဲ!
Golden Dox ၏အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်
၎င်းတို့၏မျိုးပွားမှုနှင့်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကြီးမားမှုတို့ကြောင့်ရွှေ Weiner သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကြက်တူရွေးသည်ပေါင် ၃၀ မှ ၅၀ ကြား (၁၄ မှ ၂၂ ကီလိုဂရမ်) အကြားရှိပြီးအမြင့် ၁၀ မှ ၂၃ လက်မ (၂၅ မှ ၅၈ စင်တီမီတာ) အထိရှိသည်။
လုံ့လရှိသူဖြစ်သည့် Golden Dachshund လိုအပ်လိမ့်မည် ခြံစည်းရိုးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အိမ် သူတို့ပတ်ပတ်လည်ကို run ခြင်းနှင့်ကစားအခမဲ့ရှိရာ။
ရွှေ Retriever Dachshund ရောနှော၏အင်္ကျီကို
Dachshund မိဘ၏အမျိုးအစားသည် Golden Dox ခွေးကလေး၏အင်္ကျီကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤခွေးအတွက် လှိုင်း, အလတ်စား - အရှည်ကို double- ကုတ်အင်္ကျီ ။
Golden Retriever မိဘ၏ကျေးဇူးကြောင့်၊ Dachshund မိဘအပေါ်တွင် မူတည်၍ ဘုံအင်္ကျီအရောင်များမှာမုန့်၊ အဖြူ၊ အဝါနှင့်အညိုရောင်တို့ပါ ၀ င်ပြီး Golden Dox တွင်အညိုရောင်၊
Golden Retriever Dachshund ရောစပ်ခြင်းသည်အလွန်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် လူမှုရေးအရအလွန် ။ ဤခွေးများသည်ဂရုပြုမှု၏ဗဟိုဖြစ်ရန်နှင့်ချစ်ကြည်ရေးသဘောသဘာဝရှိခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
Ginny, ရွှေ Weenie တွေ့ဆုံရန် - ပုံရိပ်ရင်း
အဆိုပါရွှေ Dox စေသည် မိသားစုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဖော် နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်လောင်းကစားပိုင်ရှင်များ။
သူတို့ကငါတို့ခွေးတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အမဲလိုက်မှုနဲ့ခြေရာခံနိုင်တဲ့အသိစိတ်ကသူတို့ကိုသားကောင်၊ ကြောင်၊
စူပါ fluffy Golden Weiner ခွေးသည်ရေချိုလေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသင့်အိပ်ရာကိုမျှဝေနိုင်လျှင်၎င်းသည်ဤခွေးအားပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးနေရာဖြစ်စေလိမ့်မည်။
သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပါ၊ ဒါကမင်းရဲ့ရွှေတံဆိပ်ကိုပြသနိုင်လိမ့်မယ် အပြုအမူ ထိုကဲ့သို့သောဝါးနှင့်တူးအဖြစ်။
Golden Weenie ကိုစောင့်ရှောက်သည့်အခါသင်မှတ်ထားရမည့်အချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဒီစွမ်းအင်ပြည့်ဝတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့တိတိကျကျရှိပြီး၊ သူတို့ရဲ့လှပတဲ့ရွှေရောင်ကုတ်ကလှပနေဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခွေးကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်နှင့်ရှည်လျားသောနောက်ကျောများကသင်၏ Golden Retriever Dachshund ရောစပ်မှုကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
သင့်ရဲ့ Golden Dox လေ့ကျင့်ခန်း
ဤစွမ်းအင်အစုအဝေးငယ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သောအမဲလိုက်သောစရိုက်များကိုပြသနေဆဲဖြစ်ပြီးအလုပ်များခြင်းကိုလုံးဝနှစ်သက်သည်။ သူတို့လိုအပ်တယ် လှုပ်ရှားမှု၏ 45 မှ 60 မိနစ် ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း၊
သင်သည်သင်၏မြင့်မားသောစွမ်းအင် Golden Dox ကိုယူရန်အကြံပြုသည် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်သည် အချို့သောလေးနက်သောအချိန်၌ကစားနေစဉ်။
ဒီ smart crossbreed သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဂိမ်းများတွင်ရှင်သန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပဟေuzzleိအနေဖြင့်ကစားခြင်းကိုကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးဂိမ်းများကိုပုန်းနေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် Golden Weenie အနေဖြင့်မည်သည့်စွမ်းအင်ကိုမဆိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။
Golden Retriever မိဘမျိုးဆက်သည်သင်၏ Golden Dox သည်ရေထဲတွင်အချိန်အနည်းငယ်ကုန်ဆုံးရန်နှင့်ခွေးကိုသူရေကူးနိုင်သောကမ်းခြေ (သို့) ရေကန်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဆိုပါကသင်၏ pooch အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ရွှေ weeny အစာကျွေး
စွမ်းအင်မြင့်မားသောကြောင့် Golden Dox သည်အခြားအသေးစားနှင့်အလတ်စားမျိုးများထက်အစာကျွေးရာတွင်အနည်းငယ် ပို၍ ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤခွေးများသည်အာဟာရကြွယ်ဝသောအစားအစာများလိုအပ်ပြီးတစ်နေ့တာလုံးအနည်းငယ်မျှသောအစားအစာများကိုစားသုံးရသည်။ သင်၏ Golden Retriever Dachshund ရောနှောမှုကိုကျွေးမွေးရန်အကြံပြုသည်2သို့မဟုတ်3သေးငယ်တဲ့အစားအစာများ တစ်ခုချင်းစီကိုမုန့်ညက်မှာအစားအစာတစ်ခွက်ပါဝင်သည်ဟုတစ်နေ့တာအတွင်း။
သို့သော် Golden Weenie ကိုအစာမကျွေးရန်သေချာစေပါ၊ ဤခွေးများမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်၏ Golden Dox အတွက်အစားအစာတစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါပရိုတိန်းပါ ၀ င်မှုနှင့်ဖြည့်စွက်မှုနည်းသောအစားအစာကိုသေချာစွာရှာဖွေပါ။ လုံ့လရှိသူဖြစ်သော Dachshund Golden Retriever ရောစပ်မှုသည်aကိုစားခြင်းမှအကျိုးရှိနိုင်သည် ကုန်ကြမ်းအစားအစာအစားအစာ သို့မဟုတ်အသား၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါ ၀ င်သောအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သင်၏ Dachshund Golden Retriever ရောနှောမှုကိုပြင်ဆင်ခြင်း
Golden Dox သည်အလယ်အလတ်တန်းစားသောအလင်းဖြစ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ဓာတ်မတည့်သူမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်ကောင်းသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မသတ်မှတ်ပါ။
Golden Weiner ခွေး၏ရွှေသော့များသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်သင့်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်မှဆံပင်အလွန်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် နေ့စဉ်သန့်ရှင်းတဲ့အလင်း လိုအပ်ပါသည်။
နေ့စဉ်သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ် ။
သင်၏ Golden Dox ကိုနေ့စဉ်သန့်စင်နေစဉ်သင့်ခွေး၏နားရွက်များကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ သင်၏ခွေးသည်ရေကူးသူဖြစ်လျှင်၎င်းကိုကာကွယ်ရန်ပုံမှန်နှင့်နည်းစနစ်များကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် တဆေးကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားထံမှ။
နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်နားသန့်ရှင်းရေး၊ နန်းတော်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်မှု သင်၏ Golden Dachshund မှဖောင်များကိုဖယ်ရှားရန် (လအနည်းငယ်တိုင်းတစ်ကြိမ်) လိုအပ်လိမ့်မည်။
ရေချိုးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သာလုပ်ဆောင်သင့်သည်၊ သို့သော်နှစ်လ၊ သုံးလတစ်ကြိမ်သင်လည်ပတ်သည့်အခါခန်းမ၌ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Golden Dox သည်အကြားနေထိုင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် 12 နှင့် 14 နှစ် ။ ဤရွေ့ကားခွေးယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာပေမယ့်သူတို့ရဲ့မိဘမွေးမြူရေးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများရှိနေသောကြောင့်အချို့သောရောဂါများမှဖြစ်ပေါ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
Golden Retriever မိဘကဒီအပြန်အလှန်ဖောက်ဖျက်မှုကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သလို၊ intervertebral disc ကိုရောဂါ , အ Dachshund မိဘမျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်မျက်စိအပါအဝင်ရွှေ Weiner အတွက် ocular ပြissuesနာများမှ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်နေစဉ်, လွှာကျုံ့ ။
ထို့အပြင်နောက်ကျောဒဏ်ရာများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘဝတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Golden Doxie သည်ငယ်ရွယ်ချိန်တွင်သို့မဟုတ်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်အနေဖြင့်ကျဆင်းသောအခါမှားယွင်းစွာလွဲမှားစွာပြုလုပ်ခဲ့လျှင်။
Dachshund Golden Retriever ခွေးကလေးကို - ပုံရိပ်ရင်း
ဒီလက်ရာမြောက်တဲ့အပြန်အလှန်ဖြတ်ကျော်မှုမျိုးကိုအလွန်အမင်းရှာဖွေပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ Golden Dox ခွေးကလေးကိုရှာရတာအရမ်းစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ Golden Retriever Dachshund mix ခွေးပေါက်စအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားဆပ်နိုင်သည်။
Golden Dox Breeders
Golden Dox ခွေးကလေးများကိုသာအထူးပြုသည့်မျိုးပွားသူကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော်လည်းရွှေခွေးငယ်လေးများကိုသာရောင်းသောမျိုးဆက်များရှိသည်။
ဤမျိုးဆက်များသည်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောရွှေအရောအနှောများကိုဖန်တီးရန်ရွှေ Retriever ကို Poodles, Spaniels သို့မဟုတ် Dachshunds တို့ဖြင့်ဖြတ်ကျော်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Golden Dox ကိုစတင်ရှာဖွေရန်ဤမျိုးဆက်များအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Taylormade Mini ရွှေပြန်လည်ရယူသူများ
Buck Eye ခွေးပေါက်စ
ရွှေ Dox ချမှတ်
အိမ်များကိုရှာဖွေနေသည့် Golden Retrievers သို့မဟုတ် Dachshunds အထူးပြုကယ်ဆယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဤမွေးစားစင်တာအများစုသည်ဤခွေးများကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်းကိုသာကြော်ငြာကြသည်။
ချစ်စရာကောင်းသောအိမ်ကိုရှာရန် Golden Dox ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်မည့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Golden Retriever ကယ်ဆယ်ရေးအရင်းအမြစ်
မြောက်အမေရိက၏ Dachshund ကယ်ဆယ်ရေး
Little Paws Dachshund ကယ်ဆယ်ရေး
Dachshund နှင့် Golden Retriever နှစ်မျိုးလုံးသည်တကယ့်ကိုချစ်စရာကောင်းသောမျိုးစပ်ခွေးမျိုးစိတ်များကိုဖန်တီးရန်အခြားမျိုးဆက်များနှင့်ရောနှောလေ့ရှိသည်။
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး Golden Retriever ရောနှောထားသောမျိုးစိတ်အချို့တွင် -
ရွှေ retriever Corgi ရောနှော
Golden Dox သည်အလွန်ဥာဏ်ရည်ရှိပြီးလေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည်၊ နှစ်သက်မှုရလိုသည်။ စွမ်းအင်မြင့်မားစွာပေါင်းစပ်ထားသောဤလက်ဝါးကပ်တိုင်သည်အသိဉာဏ်ရှိပြီးဖော်ရွေသောသဘောသဘာဝကြောင့်သူ့ကိုအဖော်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
Golden Doxie သည်ကလေးများနှင့်အခြားခွေးများပါသည့်တက်ကြွသောမိသားစုများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူ့ကို tained ည့်ခံကျွေးမွေးမည့်သူသည်သင့်အိမ်သို့နာရီပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်မှုများစွာယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခြင်းအားဖြင့်သင် Golden Dox hybrid နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းသိစေပါ။
Aussiedor: သြစတြေးလျ Shepherd Lab ကသင့်အတွက်ရောလား။
35 သင်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ပါတယ်အကောင်းဆုံး Husky ရောနှောခြင်း 35
red labrador retriever ဆိုတာဘာလဲ
Golden retriever တစ်ဝက် husky တစ်ဝက်
brindle boxer နှင့် pitbull ရောမွှေပါ